ब्रेनक्यान्सर पीडित साथी बचाउन २५० किलोमिटर पदयात्रा - अन्तर्राष्ट्रिय - Radio Kantipur
ब्रेनक्यान्सर पीडित साथी बचाउन २५० किलोमिटर पदयात्रा
क्यान्सर पीडित साथीलाई बचाउन के सम्म गर्न सकिन्छ ? त्यो पनि ब्रेन क्यान्सरको ‘स्टेज ३’ मा पुगेर पनि बाँच्ने संघर्ष गरिरहेको साथीलाई ? अष्ट्रेलियाको सिड्नीका एक अष्ट्रेलियाली नागरिकले भने बाँच्नका लागि संघर्षरत आफ्ना नेपाली साथीलाई उपचारमा सहयोग जुटाउनका लागि २ सय ५० किलोमिटर जंगलको पदयात्रा गर्दैछन । त्यो पनि लगातार १० दिनसम्म ।
करीब ९ वर्षअघि विद्यार्थी भिषामा श्रीमती सहित अष्ट्रेलिया आएका काठमाडौका विदुर कर्माचार्यलाई ३ महिनाअघि ब्रेन क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । सामान्य टाउको मात्र दुख्ने उनी अचानक अस्वस्थ बनेपछि उपचारका क्रममा उक्त रोग पत्ता लागेको थियो । सामान्य काम गरेर जिविका चलाइरहेका २ साना नानीका अभिभावक उनीहरुलाई आर्थिक भार त पर्‍यो नै जीवन कसरी ब्यवस्थित बनाउने समस्या थपियो ।
उनीहरुको समस्याबाट परिचित नेपाल गइरहने विदुरका अष्ट्रेलियाली साथी म्याट लोयडले सहयोग जुटाउने नयाँ उपाय निकाले । विदुरकै लागि भनेर न्युकासलदेखि सिड्नीसम्म २ सय ५० किलोमिटर जंगल पैदलयात्रा गर्ने र न्युनतम १० हजार डलर (करीब ८ लाख रुपैयाँ) सहयोग संकलन गरिदिने ।
म्याटले एक बेबसाईट मार्फत आफ्नो पैदलयात्राका लागि सहयोग जुटाउन आव्हान गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म झण्डै ९ हजार ५ सय डलरभन्दा बढी सहयोग संकलन गरिसकेका छन् ।
यही बुधबारदेखि शुरु हुने उनको पदयात्रा २३ तारिखमा १० दिनपछि टुङ्गिनेछ । विदुरको लागि सहयोग जुटाउन लागिपरेका म्याट विदुरलाई नेपालमै भेटेको र अत्यन्तै मिल्ने साथी भएकाले पनि आफू सहयोग संकलनमा लागेको सुनाउँछन् । ‘विदुर जस्तो टिपिकल नेपाली साथी पाउन एकदमै मुस्किल पर्छ ।’ उनले रेडियो कान्तिपुरसँग भने – यसैका लागि पनि म उसलाई बचाउन र परिवारलाई सहयोग पुरयाउन यो अभियानमा लागेको हुँ ।
म्याटले शुरु गरेको यो अभियानमा करीब १ सय जनाले न्युनतम १० डलरदेखि ५०० डलरसम्म सहयोग गरिसकेका छन् । सहयोग अभियान अझै २ साताबढी चल्ने भएकाले सहयोग रकम थप जुट्ने विश्वासमा उनी छन् । भन्छन, यो अभियानको उद्देश्य सहयोग जुटाउने भएपनि साथीका लागि हामीले चाह्यौं भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु पनि हो ।
उनी यही सेप्टेम्बरका २३ तारिखमा ५० वर्ष पुग्दैछन् र आफू ५० वर्ष पुगेको खुशीयाली विदुरसँगै अस्पतालमा गएर मनाउने योजनामा छन् । ‘मैले आफ्नो जन्मदिन प्रिय नेपाली साथी जो बाँच्नका लागि संघर्षरत छ उसँग मनाउन पाउनु ठूलो अवसर हुनेछ ।’
सिड्नीबाट ५ घण्टाको दूरीमा रहेको डब्बोमा बसोबास गर्ने विदुर विगत ३ महिनादेखि उपचारका क्रममा अस्पतालमै छन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट नियमित उपचार गराइरहनुपर्ने उनीहरु आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको भएपनि कसैलाई सार्वजनिक रुपले सहयोगको आग्रह गरेका छैनन् । उपचारमा नियमित सहयोग पुरयाइरहेकी उनकी श्रीमती बिनु महर्जनले म्याटको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन र उनको पैदलयात्रा टुङ्गिने दिन सिड्नीको सर्कुलर कि मा उपस्थित भइदिन आग्रह गरेकी छिन् ।
प्रकाशित:भाद्र २१, २०७५